शहर झरेको गाउँलेको १ दिनको ८ अनुभव — Bhaktapurpost.com
शहर झरेको गाउँलेको १ दिनको ८ अनुभव
अपरिचित लेखकभक्तपुर, १९ कात्तिक
जाजरकोट खलंगा आएर नेपालगन्ज जाने बसको टिकट काटेँ, टिकटमा सिट नं खुलाइएको थिएन । सोचे जस्ले सिट रोज्यो त्यहिँ बस्छ होला । गएर क्यावीन सिट रोजे केहि समयपछि गाडिको स्टाफ आएर आफनो मान्छेले पहिलै रोजेको भन्दै मलाई उठायो र आफनो मान्छेलाई बसाल्यो । म हेरेको हेर्यैँ भएँ । किनकी मैले टिकट काट्दा गाडि रित्तो थियो । म उठदा गाडि प्याक भैसकेको थियो । कसरी पहिलै सिट रोज्यो उसको मान्छेले ? बस चढेँ । बस चढदा रित्तो बस म सिटबाट उठदा खचाखच भैसकेको थियो । उसको पहुँचका अगाडि म निरह भएर उभिए ।
बसले छेडा आएर खाना खाने समय मिलायो सबै गाडिबाट और्लियौँ । उनिहरुको अर्डर भएको होटलमा पस्यौँ । गाडि स्टाप र केहिजना सुकिला मान्छेलाई भित्र गोप्य कोठामा लिएर खाना खुवाइयो । हामी होलसेलवाला बाहिरै भरियौँ । बर्षायामको कर्णालीको पानी जस्तै दाल मात्र दुइ फयाक नकेलाएकोे आलुको तरकारी दुई लहरा साग र थोरै लेदो अचार सहित भोकको पूजा गरियो । म मासंहारी भएको उनीहरुलाई कसरी थाहाँ पाए ? सुटुक्क ल्याएर एक प्लेट कुखुराको मासु पनि राखिदिए । ३ पटक फिर्ता लिनुस् भनेँ सुनेनन् । अन्तत: त्यसको मूल्य पनि दुरुस्तै तिरियो ।
सिट नजिकै एकजनी बाहुन थरकी युवती बसेकी थिइन् । उनीसंग लामै कुराकानी भयो । कुराकानीका क्रममा नाम र थर सोध्नुभयो मैले– विश्वकर्मा भने । उहाँले शिरदेखि पाउसम्म नजर डुलाएर हेर्नुभयो । तर, त्यसपछि बाेलीकाे रफ्तार बन्द भयाे । मन लाग्दी बोल्नै छाड्नु भयो । मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो ।
बिहान अस्पताल चेकअप गराउन पर्चा लिन भेरी अस्पताल पुगेँ अस्पतालको लाइनमा लागे । गरिबहरुका लागि सस्तो र सजिलो लाग्ने भेरी अस्पतालमा मान्छेको भिड हुनु स्वभावीक थियो । भिडको बिचमा भिड छिचोल्दै पर्चा हेल्परलाई बुझाएर बसेँ १० बजे बुझाएको पर्चाको पालो साढे १२ मा आयो करिब ३० जना पछाडि रहेको पर्चा सहयोगिले ६० जना पछि बनाइदियो । मनमा अन्याय भएको महशुस भैइरह्यो भन्न सकिन । किचकिच गर्यो भने झन् अप्ठयारो होला सोचेँ ।
सम्पुर्ण रिर्पाटहरु लिएर ३ बजे डाक्टरकोमा गएँ डाक्टर हतारमा भएकोले त्यहाँ समय दिन सकेनन् उनले ५ बजे निजि क्लिनीकमा बोलाए आफुलाई त्यहि भेटन सकिने नत्र एक हप्ता बिदामा रहने बताए । एकहप्ता कुर्नु भन्दा उतै क्लिनिकमा जाने निधो गरेँ । भेरीमा २० रुपैयाँ तिरेर हेरेको मेरो रिर्पोट ५ सय तिरेर देखाँए । त्यहिँ क्लिनीकबाट औषधी बोकेर फिर्ता भएँ ।
हरेक नागरीक केहि न केहि रुपमा दिनहुँ ठगिरहेको हुन्छ । दलाली हरेक कुरामा देखिन्छ । यी केही अति सामान्य र दिनहुँ भोगिने घटना मात्र हुन् । नेपालमा दलाली गर्नेहरूले मनग्य कमाइरहेका छन् । सोझासाझाहरु पाहिला सार्नासाथ ठगिने अवस्था रहेकाे छ । यसतर्फ कसको ध्यान जानु !